Travel World: August 2012
Re: MOHT Announcement On Restricted Areas
This announcement described to the world bad condition in Sittwe and MraukU .
Base on the ground news from MraukU , no problems for tourists.
Please reconsider MOHT.
On Friday, August 31, 2012 10:39:39 PM UTC+6:30, Nyi Nyi ® wrote:
MOHT Announcement On Restricted Areas
via Enchanting Myanmar by Hpone Thant (Harry) on 8/30/12
Ministry of Hotels & Tourism had announced that international tourists are not allowed to visit the following areas until further notice due to present situation:
(1)Sittwe, Mrauk U(Rakhine State)
(2)Vesali, Maha muni pagoda(Rakhine State)
(3)Mong La(Shan State)
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msg/travelmyanmar/-/H1-YittOp9YJ.
Posted by Travel at 9:45 PM0comments
မဖွံ့ဖြိုးသေး ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံများ နှင့် ခရီါ်သွားအကြောင်းပါ။
နောက်တစ်ခုက သီပေါ မပါခင် မန္တလေး မှာဘယ်လိုဆိုတဲ့အကြောင်းလေး။
မန္တလေး မှာသံဃာတော် ဘယ်နှစ်ပါး ဆရာတော်ဘယ်နှစ်ပါး တစ်နိုင်ငံလုံးမှာဘယ်နှစ်ပါး အားလုံးပါပါတယ်။
နောက်တစ်ပါတ်ကို မော်လမြိုင် အကြောင်းတင်ပါမယ်။
Posted by Travel at 5:43 PM0comments
IT Analyst in SanJose, CA
• 7+ years' experience as an IT Analyst
• 3+ years in IT Service Management
• Strong understanding of the IT Service Management lifecycle and inter-relation of different process areas based on ITIL v3 and other frameworks such as SOA, TOGAF & eTOM
• Strong Analysis and Requirements Definition experience
• Excellent Client Facing and Cross Functional skills
• Documentation, diagrams, flow charts, and visual representation of concept
• Leadership, communication, influence, and presentation skill
• Experience in IT operations environments and/or Quality Assurance team
Sr. Technical Recruiter– SoftSol Inc
Office: (510) 460-1831
E-Mail: devender.kondam@softsol.net | Web: http://softsol.net
Posted by Travel at 1:37 PM0comments
Cloud Computing Engineer in San Mateo, CA
Duration - 3-4 months contract.
Location – San Mateo, CA
- Extensive experience in implementing and maintaining high-availability Linux compute clusters, web applications, and large data sets onacloud computing platform
- Jingle (It isaprotocol used in Multimedia, VOIP etc…)
- Advanced knowledge of load balancing, clustering, virtualization, performance management, system sizing and configuration
- Cloud computing experience utilizing Amazon Web Services, RackSpace, Opsource, Vmware, and the like
- Python, Ruby, and/or Java programming in Linux/Unix environment
- Working knowledge of MySQL and/or NoSQL data stores
- Familiarity with Hadoop/MapReduce with Pig and/or Hive isaplus
- BS or MS or PhD in Computer Science or related discipline
- Minimum5years of experience in professional software development and engineering
Sure Shot Closure USC and Gc Only -- Pega Consultant/Horsham, Pa/6 Months Contract to hire
Position : Pega Consultant
Sure Shot Closure USC and Gc Only
Over 4+ years of dedicated experience in developing BPM applications using PRPC 6.x, Java, XML, HTML and UML languages
Pega certified (CSA or CSSA)
Experience leading, training and mentoring junior Pega Developers
Must have good experience in design and development of large scale Business Process Management (BPM) and Business Rules Engines (BRE) applications
Healthcare domain knowledge is needed, knowledge and usage of Healthcare frameworks e.g. CPMHC, ISPM,HCIF etc. in real life projects
Experienced in developing Work Flow, Interfaces, UI's Business Rules using PRPC, knowledge of Pega BIX is added advantage
Experience in Eclipse, IBM WebSphere, BEA WebLogic, Apache Tomcat, Java web server, Oracle App Server
Strong knowledge of industry standard interface protocols (i.e. SOAP, MQ, HTTP, EJB etc.)
Must beagood team player with excellent communication and interpersonal skills
Adaptable to challenging environments as well asastrong work ethic and commitment to achieve client's objectives.
Crescens Hot List (August 31 st, 2012)
Susil Project Manager Charlotte, NC Yes H1B 9+
Swathi QA North Carolina Eastern side of USA H1B 6+
Sree SAP HCM Techno-Functional Consultant Dallas, TX Yes H1B 10+
Suneetha SAP BWBI Devon, PA Near by Devon, PA H1B 15+
Brunda Business Analyst Phoenix, AZ San Diego, CA H1B 7+
Priya Embedded Software Engineer Toronto, Canada MI / OH / PA / NY H1B 7+
Srinath Automation Tester Cranston, RI Near By RI or Chicago IL H1B 11+
Posted by Travel at 10:16 AM0comments
ETL tester in Fremont, CA
Looking foraJunior level person to join QA Team with
1. Good ETL testing background (worked on at least 1-2 good long term projects)
1. Extensive sql testing background (i.e. able to write store procedures, and joints involving 5+ tables)
Re: အလုပ်သင်လေးတွေ မှားနေပြီ
The apprentice now didn't haveachance to learn but to step down! We hope the remaining department won't experience like us.Your prediction was 100% correct. Only with Parliament recognition, the new minister of tourism can be assigned whoever it will be.
On Friday, August 31, 2012 9:55:58 AM UTC+6:30, Nyi Nyi ® wrote:
ပထမအကြိမ်ဝန်ကြီးအပြောင်းအလဲ (လွှတ်တော်မပေါ်ခင် ဦးစိုးနိုင်မှ လွှတ်တော်ပေါ်ပြီး ဦးတင့်ဆန်း)တွင်ပေါ်လာခဲ့သောအတွေးအမြင်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့်အရာတွေကမှားယွင်းစေခဲ့သည်ဟုပြန်ပြောင်းစဉ်းစား ချင့်ယူနိုင်ရန်အလို့ငှာယခုအချိန် ဝန်ကြီးအပြောင်းအလဲတွင် အလုပ်သင်လေးတွေမှားနေပြီ အား ပြန်လည်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
On Tuesday, June 7, 2011 2:52:53 PM UTC+6:30, Nyi Nyi ® wrote:
အခုတလောမှာ သတင်းတစ်ပုဒ်ကို ဂျာနယ်တွေမှာဖတ်မိပါတယ်။ Myanmar Tourism Board ကိုဖွဲ့စည်းတဲ့အကြောင်းလေးပါပဲ။
စဦးစွာပြောလိုတာကတော့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော့်မှာ ဘာအကျိုးစီးပွားမှမရှိ။ အခုပြောတဲ့သူတွေအပေါ်မှာလည်း ဘာအငြိုးမှ မရှိ။ နောက်ပြောချင်တာကလ...ည်း ဒီကိစ္စတစ်ခုတည်းကိုမဟုတ်။ ဒီလိုအလားတူ ကိစ္စတွေ အလုပ်လုပ်ပုံတွေကိုပါပြောလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးသွားဝန်ကြီးဖြစ်လာတဲ့ ဦးတင့်ဆန်း ( သူက အရင်တုန်းက ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်တဲ့ စီးပွားရေးသမားပါ။ သူက အစိုးရယန္တယားကို ဘယ်လိုလည်ပတ်ရတယ်၊ ဘယ်လို စည်းမျဉ်းတွေ လိုက်နာရတယ် ပြည်သူလူထုကို ဘယ်လို သဘောထားသင့်တယ် ဆိုတာ လေ့လာထား မထား မသိပါဘူး။ ဝန်ကြီးတော့ ဖြစ်လာပါပြီ။) ကနေပြီးတော့ ဇေကမ္ဘာကုမ္ပဏီ ဆိုပြီး စီးပွားရေးလုပ်နေရာက အမတ်ဖြစ်လာတဲ့ ဦးခင်ရွှေ ( နာမည်ပြောရတာက အဲဒီကုမ္ပဏီ ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ စွမ်းဆောင်မှု အရည်သွေးများကို မြင်စေချင်လို့ပါ။ အဲဒီကုမ္ပဏီ ခေါင်းဆောင်ရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုအရည်အသွေးကိုလည်း မြင်ကြစေချင်လို့။ အလုပ်လုပ်တဲ့ စတိုင်ကိုလည်း သိစေချင်လို့) ကို Myanmar Tourism Board ဖွဲ့ပါ။ တာဝန်ယူပြီးလုပ်ပါ လို့ ခိုင်းပါသတဲ့။ ဒါနဲ့ အဲဒီ အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီး လို့ စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပါသတဲ့။ အဖွဲ့အောက်မှာ အသင်းငယ်တွေစုပေါင်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘုတ်အဖွဲ့အနေနဲ့ ခရီးသွားဧည့်လမ်းညွှန်တွေရဲ့ဝတ်စားဆင်ယင်မှုက စလို့ ထိမ်းကွပ်သွားမှာဖြစ်သလို အဖွဲ့အောက်မှာပါတဲ့ အသင်းတွေကိုမဝင်ရင် ရပ်တည်လို့ မရနိုင်သလိုမျိုးပြောတာကိုလည်း ဖတ်ရပါတယ်။ နောက် ဘုတ်အဖွဲ့အောက်က စားသောက်ဆိုင်အသင်းကို ဝင်မထားတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေကို နိုင်ငံခြားသားတွေကို ကျွေးမွေးခွင့်မပြုဘူး။ ခေါ်သွားတဲ့ လမ်းညွှန်နဲ့ ခရီးသွားကုမ္ပဏီကိုအရေးယူမယ်လို့လည်းသတင်းထဲမှာပါတာဖတ်ရပါတယ်။(Voice vol7/No.25 page-11) အဲဒီလို အရေးယူနိုင်ဖို့ အတွက် စောင့်ကြည့်မယ့်အဖွဲ့အစည်း Tourism Police ဆိုတာလည်း ဖွဲ့ဖို့ပြင်နေပါတယ်တဲ့။ ကျွန်တော်သိသလောက်တော့ Tourism Police ဆိုတာ တိုးရစ်တွေကို ကူညီပေး ကာကွယ်ပေးမယ့်အဖွဲ့မျိုးပါ။ သူတို့ကျမှ ကိုယ်လုပ်ချင်တာ ချမှတ်တာကို မလိုက်နာတဲ့သူ ဖမ်းခိုင်းတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်နေပါကော။ ဆိုလိုရင်းကတော့ (၁) ဘုတ်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းမယ် ဆိုကတည်းက ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ ဥပဒေ နဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဥပဒေ ကြမ်းတွေကို လွှတ်တော်မှာ တင်ရပါမယ်။ (၂) လွှတ်တော်က အတည်ပြုပြီး သမ္မတက လက်မှတ်ထိုးမှ သာ တရားဝင်ပါတယ်။ (၃) ဘုတ်အဖွဲ့ နဲ့ ဟိုတယ်၊ခရီး ဝန်ကြီးဌာန ရဲ့ အာဏာနဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် ခွဲဝေမှုက ထပ်မနေရပါဘူး။(လုပ်ငန်းတစ်ခုက အဖေ၂ယောက်၊မှတ်ပုံတင်၂ခါလုပ်၊ စားရိတ်၂ခါကုန် မဖြစ်စေသင့်ပါဘူး။ အရေးယူမှုလည်း ၂ခါမခံရစေပါဘူး။) အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့လည်း ကိစ္စတစ်ခုတည်းအတွက် လူ၊ငွေ ထပ်ပြီးအကုန်ခံစရာမလိုပါဘူး။ ဒါတွေ ကို စဉ်းစားဖို့ လွှတ်တော်က ဥပဒေပြု အမတ်များ စဉ်းစားဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ ဒီလိုမဟုတ်ပဲ ဝန်ကြီးလုပ်တဲ့သူကလည်း လုပ်ပါဆိုတာနဲ့ လုပ်တာပဲ။ ဖွဲ့ဆိုတာနဲ့ဖွဲ့တာပဲ။ ကိုယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့ အာဏာလက်စောင်းထက်စေဖို့ အရေးယူမယ်ဆိုတာတွေလည်း လုပ်တော့တာပဲ။ အရေးယူဖို့ဆိုတာ ဥပဒေရှိမှ ဆိုတာလောက်တော့ သိသင့်ပါတယ်။( အမှိုက်မပစ်ရ ဒဏ်ငွေ တစ်သောင်း ဆိုပြီး လုပ်ချင်ရာလုပ်လို့ရသလိုမျိုးဖြစ်နေပြီ)။ လက်ရှိ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေ နဲ့ အစိုးရ ယန္တယား လည်ပတ်ပုံကို နားမလည်။ တကယ်တော့ ဒီတာဝန်တွေယူရင် နားလည်ဖို့လုပ်သင့်ပါပြီ။ အလုပ်သင်လေးတွေမို့မှားပါတယ်ဆိုရင်လည်း ပြင်သင့်ပါတယ်။ သူတို့အမှားကို သူတို့မမြင်ရင်လည်း ပြင်ပေး ထောက်ပြပေးမယ့် ဥပဒေပြု အမတ်များ၊ စာနယ်ဇင်များ ( Egress ကိုလှမောင်ရွှေ က ဒီဘုတ်မှာ ဒုဥက်လုပ်နေလေရဲ့) လည်း ဒီကိစ္စကို မမြင်ကြလေသလား နားမလည်ကြလေသလားမသိပါ။ ဘာမှပြောသံမကြားရ။ ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ဘာလည်း။ လူအများက ရွေးချယ်တင်မြှောက်တာလား၊ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပြီး ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တာလည်း ဆိုတာကိုပါ ဆက်လေ့လာစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးက ခေါင်းစဉ်လောက်သာ သိပြီး ရပ်သွားတတ်ကြလို့ပါ။ စေတနာကတော့ ဘယ်သူ့သွားမေးမေး စေတနာနဲ့လုပ်တာပါလို့ ပြောကြတာချည်းပဲ။ လုပ်ရည်ကိုင်ရည် နဲ့ ဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းသာ နည်းတာပါ။ စေတနာအမှန်နဲ့ မှားပါတယ်ဆိုရင်လည်း(ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ) အလုပ်သင်လေးတွေမို့ ခွင့်လွှတ်ရမှာပေါ့။
(ဒီစာပိုဒ်ကို facebook မှ ကိုရန်အောင်ကျော်၏ note မှခွင့်ပြုချက်တောင်းပြီးပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msg/travelmyanmar/-/a9cEHbY-YkEJ.
Posted by Travel at 10:02 AM0comments
Myanmar Tourism Board (Federation?) မှကြီးမှုး၍ World Tourism Day အထိမ်းအမှတ်စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး tourism industry တွင်လုပ်ကိုင်နေသူများကိုသာဝင်ရောက်ဖြေဆိုစေမည်ဟုသိရသည်။ ဖြေဆိုရမည့်ခေါင်းစဉ်မှာ "World Tourism Day 2012" - Tourism and Sustainable Energy: Powering Sustainable Development ဖြစ်ပါသည်။ နေပြည်တော်တွင် စက်တင်ဘာ ၂၇ ရက်နေ့ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး ဖြေဆိုမည့်သူများသည် စက်တင်ဘာလ (၂) ရက်နေ့တွင်အောက်ပါမြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်သို့အကြောင်းကြားရန်ဖြစ်ပါသည်။
အမှတ် ၃ (A), ဝေဇယန္တာနှင့်သံသုမာလမ်းထောင့်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်
ဖုန်းနံပါတ်၊ (၀၁) ၈၅၅၁၀၁၂၊ ၈၅၅ ၁၀၁၃
ဖက်(စ်)၊ (၀၁) ၈၅၅ ၁၀၁၆
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msg/travelmyanmar/-/HDsKgu73biUJ.
Urgent need for UI Designer / Developer,Lake success, NY, 12 months
Title: UI Designer / Developer
Role - Responsible for detailed story board & UI design & development. Proficient
Technical Skills - Overall around 4-5 years of experience with at least2year of experience on front-end applications –
Ideal candidate would have strong fundamentals; good aptitude, troubleshooting and R&D skills and experience of working on challenging projects needing strong technical abilities
b)Design and implement front-end business applications while working closely with usability team members, product managers, development teams and other internal stakeholders.
c)Basic knowledge of Engineering/PM Tools – Unit Test automation (Junit), SVN, Agile tools like Jira
d)Exposure to other web based tools lke Flash, Visio, Adobe, DreamWeaver etc and other mockup tools.
e)Experience with methodologies such as Iterative development , Agile, RUP, and Lean.
f)Very Strong object oriented programming models and concept.
g)Good presentation skills, and ability to communicate with various audiences, including end users, managers, and members of the IT team.
h)Quick learner who is easily able to learn new products, systems, applications and technologies.
Technical Skills - Secondary ( Good to Have)
a. Experience working on Linux and other open source technology/tools.
b. Experience in ASP.NET\_ Java\_Python is an added advantage
c. Experience with cross-browser development and debug tools
d. Experience in any MVC framework is an added advantage
Posted by Travel at 9:39 AM0comments
Re: Re;btga statement..,
On 8/31/12, Aung Thu Ra <aa.aungthura@gmail.com> wrote:
>့ ပြောရင်ကြိုက်တဲ့နေရာကနေပြောလို့ ရပါတယ်..အမှန်တရားအတွက်ရေးရဲလားမရေး
> ရဲလားဆိုတာ ဂျာနယ်တွေ တွေရေဒီဟိုတွေနားထောင်တဲ့လူဆိုသိနိုင်ပါတယ်
> တောင်းဆိုစရာမလိုပါဘူး အမှန်တရားအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ချင်လို
> 2012/8/30 nyi htike <nyihtike09@gmail.com>
>> ဘက်လိုက်မှုကင်းသော တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာ အဖြစ်၊ အမှန်တရားအတွက် ရေးရဲ တဲ့
>> ဆက်လက်ရပ်တည်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
>> အယ်ဒီတာ တဦးအနေမနဲ့ တဘက်သတ် နစ်နာစေ မဲ့ အတည်မပြုရသေးတဲ့ သတင်းစကားကို
>> ပြည်သူသို့ တင်ပြရန်သင့်မသင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိမှာပါ။
>> အကယ်စင်စစ် ဧည့်လမ်းညွှန်တဦးက တကယ် ပြောခဲ့ရင်အားလုံးက ၀ိုင်းဝန်း
>> ကန့်ကွက် ရှုံ့ချရမှာပါ။
>> အမှန်ကိုသိ စေလိုတာပါ။
>> On 8/30/12, Aung Thu Ra <aa.aungthura@gmail.com> wrote:
>> > ပြင်ပဆောင်းပါးရှင်ဆိုတာ Journalist မဟုတ်ပါဘူး နဲနဲတော့ခွဲခြားသိစေချင်တယ်
>> > ဘယ်လို ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတွေ့ ဆုံဆွေးနွေးတာတော့အကောင်းဆုံးပါ
>> > ရန်ကုန်လာပြီးရှင်းမယ်ဆိုရင်လဲ သတင်းထောက်ကွန်ယက်သုံးခန်းကိုအခဲ့သုံးလို
>> >့ ရပါတယ်
>> > 2012/8/29 nyi htike <nyihtike09@gmail.com>
>> >> Journalist များကို သေချာဖိတ်ခေါ်ရှင်းပြသင့်ပါတယ်။
>> >> ပုဂံမှာ မီဒီယာတွ့ဆုံပွဲတခုလုပ်ပြီး ရှင်းသင့်ပါတယ်။
>> >> ပုဂံအဖွဲ့ ဆက်လုပ်ပါ။
>> >> ကိုယ့်ဒေသ အတွက် ကိုယ်မဆောင်ရွက် ရင် ဘာအတွက်အသင်းရှိနေတာလဲ
>> >> ကျုပ် တို့ ကတော့ အပြညိ့အ၀ ထောက်ခံပါတယ်
>> >> On 8/28/12, Yannaing Htun <yannainghtun08@gmail.com> wrote:
>> >> > BGTA was absolutely right.
>> >> > This matter could be an insult. It is so sure that no guide will
>> >> > explain like that. It could beaset up by Living Color. I could not
>> >> > believe why the editor of this magazine allow to print this nonsense.
>> >> > Yan Naing Htun ( Mandalay ).
>> >> > On 8/28/12, Ko Nyi Nyi <nyi123@gmail.com> wrote:
>> >> >> MTGA ( Bagan Zone ) ၏ ဆောင်၇ွက်ချက်ကို အပြည်.အ၀ထောက်ခံပါသည် ။
>> >> >> ဘယ်လိုင်စင်ရဧည်.လမ်းညွှန်ကမှ ထိုသို.ရှင်းမည်မဟုတ်ပါ ။
>> >> >> ထင်မိထင်ရာစွတ်စွဲတာတွေ ရပ်ဖို.ကောင်းပါပြီ ။
>> >> >> ကိုညီ ( သရ၀ဏ်)
>> >> >> On 8/27/12, winzaw oo5 <winzawoo5@gmail.com> wrote:
>> >> >>> ပုဂံ ဇုံ မှ အလုပ်အမှုဆောင်များနှင့် ဧည့်လမ်းညွှန်များ
>> >> >>> လိုအပ်ရင်အခုစာကို ဂျာနယ်လစ်အဖွဲ့အစည်း သို့ လိပ်မူ တင်ပြသင့်ပါတယ်။
>> >> >>> တဆင့်ပေးပို့ ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျ၊
>> >> >>> ဧည့်လမ်းညွှန် များသည် လိုင်စင်ကဒ်များချိတ်ဆွဲထားရန်
>> >> >>> အုတ်ရောရော ကျောက်ရောရောမဖြစ်ရန် အစီအမံများဆောင်ရွက်သင့်ပါပြီ။
>> >> >>> လေးစားစွာ-
>> >> >>> ၀င်းဇော်ဦး
>> >> >>> အတွင်းရေးမှူး ၊Mandalay
>> >> >>> On 8/27/12, btga ga <btgabagan@gmail.com> wrote:
>> >> >>> "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange
>> >> >>> Burma)" group.
>> >> >>> To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com
>> >> >>> travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
>> >> >>> For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out.
>> >> > "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange
>> >> > inside
>> >> > Burma)" group.
>> >> > To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
>> >> > travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
>> >> "Travel Myanmar (Tourism information, activities, idea exchange inside
>> >> Burma)" group.
>> >> To post to this group, send email to travelmyanmar@googlegroups.com.
>> >> travelmyanmar+unsubscribe@googlegroups.com.
Crescens Job:IBM Mainframe COBOL Developers, Columbus OHIO.
Please go through the below requirement and send matching resumes to amadhan@crescensinc.com.
Job Title : IBM Mainframe COBOL Developers
Location : Columbus OHIO.
Clearance : "ADP-I / ADP-II" security Clearance.
Number of positions:7( mid level to seniors needed)
• Develop, test, and support an extensive portfolio of complex vendor and in-house developed financial applications written in COBOL
• Develop COBOL programs for new specifications and/or requirements
• Collaborate with system analyst and end users to understand emerging business opportunities and troubleshoot incidents, resulting in effective IT application solutions
• Provide periodic on-call support for batch processing environments including problem analysis and resolution, for production system monitoring of production MOCs
• Effectively communicate project status with clients and peers inadynamic and robust IT environment
• Participate in system walk-thrus with team and/or functionals
Qualified personnel would possess
• At least5years + of programming experience inaCOBOL batch environment
• Associate or Bachelor of Science in Computers, or in lieu ofadegree in technology3years + of program analysis experience
• In-depth knowledge of JCL
• Working knowledge of MANTIS
• Ability to perform debugging technics on system analysis and/or data problems
• Ability to support the entire systems development life cycle
• Experience writing technical design documents, specifications, test and implementation plans.
255 Old New Brunswick Road Suite N230-A
Posted by Travel at 8:22 AM0comments
Crescens Job: SAP EHS requirement, Las Vegas, NV
Please send matching resumes to svikranth@crescensinc.com
Position – SAP EHS Consultant
Duration – 6+ Months (First Week - Onsite, After that - Remote)
The client has already implemented EHS module and are looking to tweak/improve the system.
This opportunity is 6+ Months with the first week onsite (40hrs) and the rest of the period remote for 20hrs per week.
CRESCENS INC (An IBS Group of Companies)
PH: 732 305 2858 x 451 | FAX: 732 305 2861 | Mail: svikranth@crescensinc.com
www.crescensinc.com | www.ibs-consulting.net | "E-Verify Employer"
http://www.linkedin.com/in/vikranthl | YIM: vikranthsivaraman | Gtalk: vikranth.usrecruitment
Posted by Travel at 7:53 AM0comments
Immediate Position .NET Developer/Plano, TX/6 Months
2+ Years with
C# - .NET Framework 3.5
Microsoft Enterprise Library 4.1/5.0
ASP.NETSQL Server 2005/2008
Our clientaleading Microsoft Business Partner is looking fora.Net Developer to join there team forahigh profile project with one of their clients. They will be working on anahuge custom web development project that is almost to go live and they needaperson that can hit the ground running. The project is taking software and making it intoaservide within the tax world. The company will focus this product on huge companies who have internal audit departments but haveaneed for this type of software service.